Mejupụtara Ọdịdị nke akpaka ịkpụzi igwe
Ọdịdị dị n'ime nke fuselage ahụ: fuselage ahụ bụ ihe owuwu siri ike siri ike, nke teknụzụ ịgbado ọkụ nke 10mm-12mm, na akụkụ nke elu jikọtara ya na ogwe aka na-agagharị site na nkuku dị n'etiti, nrụgide na-arụ ọrụ dị elu na nrụgide iji kwado siwing n'etiti ...
Olee otú ịhọrọ akpaka ịkpụzi akara?
Nhọrọ nke usoro ịme ihe kwesịrị ịdabere n'ọtụtụ ihe, gụnyere: (1) Nkedo ihe ziri ezi: Mgbe ngụkọta oge ngụkọta nke usoro ihe nkedo dị elu, enwere ike ịchọ nrụrụ ihu maka mgbatị ahụ, usoro imepụta ihe atụ elu ájá ebu compactness ...
Asatọ uru nke akpaka ịkpụzi igwe
1. Igwe na-akpụzi igwe na-anabata igwe dị oke nkenke, microcomputer, na njikọ usoro nchọpụta usoro, nke emezuru nke ọma, dị mfe iji rụọ ọrụ, ndị ọrụ nwere ike mụta ngwa ngwa iji rụọ ọrụ, naanị otu onye nwere ike ịlele arụmọrụ igwe. Kpụzi àgwà bụ mụ, edo ...
Olee otú ịlele akpaka ịkpụzi igwe na-arụ ọrụ?
site ha na 21-03-07
Mgbe ejiri igwe na-akpụzi maka oge, isi igwe ga-eji nwayọ na-agagharị nwayọ, nke na-emetụta arụmọrụ ọrụ. N'oge a, anyị nwere naanị ụmụ akwụkwọ ndị ji nlezianya achọpụta ịkpụzi igwe, nyochaa ihe kpatara ọnọdụ na-adịghị mma na ụlọ ọrụ ahụ, ma ...
Iji meziwanye nkenke nke igwe na-akpụzi akpaka, a na-ejikwa obere nhazi mmiri nke eriri akara ma jikwaa ya. Thekpụzi igwe na-agba ọsọ were were na a pụrụ ịdabere, na haịdrọlik usoro draịva mma ọrụ. Ejiri akụrụngwa akụrụngwa ahụ, nke na-ebelata ...
Enwere ọtụtụ mmejọ na sistemụ hydraulic nke igwe akụrụngwa akpaka. Dịka ọmụmaatụ, mmetọ mmanụ nwere ike ime ka nrụgide ọrụ nke hydraulic njikwa, nrụgide ma ọ bụ ntụzịaka na-adịghị mma, ma weta nnukwu nsogbu na nhụjuanya usoro hydraulic. Nzọụkwụ ọzọ ...
Gịnị okwu a ga-atụle mgbe akpaka ịkpụzi akara layout?
1. Nhọrọ nke isi na inyeaka nke usoro mmepụta nke ịkpụzi ụlọ ọrụ na nhazi nke usoro mmepụta. Typedị ihe dị iche iche nke kachasị emetụtakarị n'ụdị ihe atụ, dịka ájá ụrọ nkịtị, ájá sodium silicate na aja resin; nyocha usoro nyocha ...
Gịnị bụ ihe mere na akpaka ịkpụzi igwe anaghị ama jijiji?
1. Na usoro ịchọpụta ọdịda nke igwe ịkpụzi, ikuku ikuku na-egbochi. N'ihi na mgbapụta agụụ nwere ike ịmepụta mmiri n'oge usoro mmepe, a ga-egbochi ihe ndọtị na ikuku ikuku site na ịgbakwunye ụfọdụ ihe mba ọzọ na pipeline ruo ogologo oge. ...
Alingnagide ọdịda na-ezute mgbe ị na-eji igwe na-arụ ọrụ na-akpaghị aka
1. N'ihi oge dị ogologo oge, ịkpụzi ohere mmepe na-aga n'ihu na-apụta. Igwe ihe na-esonụ na-ada: A na-atọpụ isii ogwe aka hexagon hexagon na-ejikọ okpokoro vibration na piston vibration, nke mere na ọdịiche dị n'etiti tebụl vibration na piston s ...
Iji meziwanye nkenke nke igwe na-akpụzi akpaka, a na-edozi obere ihe ntanetị nke eriri akara. Machinekpụzi igwe nwere ike rụọ ọrụ were were, pụrụ ịdabere na n'enweghị n'ihi na ọ na-chụpụrụ site haịdrọlik usoro. Ejiri akụrụngwa eji arụ ọrụ, nke nwere ike belata ...
Olee otú ndị nkịtị nsogbu nke akpaka ịkpụzi akara ga-overhauled?
一. Nnyocha nke akụrụngwa na akụrụngwa 1. ite ahụ kwesịrị ịdị na-emebi emebi, na ọnọdụ nke akụrụngwa kwesịrị ịdị na-agbanwe ma nwee ntụkwasị obi. Anyị kwesịrị ịwụnye mpempe ihe atụ n'etiti anụ ahụ na cylinder ujo dị ka mkpọtụ na-adọrọ adọrọ na ihe na-awụ akpata oyi. 2. Ntuziaka ntuziaka ahụ ma ọ bụ ngọngọ nduzi kwesịrị ịbụ ...
Kedu otu esi emeso mmechi nke igwe akụrụngwa akpaka n'okpuru ọnọdụ dị iche iche?
1. Mechie mgbe mgbanwe gachara Ndị mmadụ na-achọkarị ịhapụ ọrụ mgbe ọrụ gachara ma ịkwesịrị ịkwụsị. N'okwu a, ndị ọrụ mmepụta kwesịrị ịlele igwe ịkpụzi ahụ ka ọ ghara inwe iberibe ihe dị na akụrụngwa ahụ. Ya mere, ndị mmadụ nwere ike idebe akụrụngwa dị ọcha site na nhicha. 2. Nwa oge shu ...
Punch Out igwe, Flask Nkedo, Nkedo igwe, Flask akpụzi Machine, Ọkara Automatic Nkedo Machine, Sandbox,